प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ मा अल्झिए दर्शक
काठमाडौं । गायक तथा गीतकार प्रकाश सपुतको ‘बोलमाया’ को प्रिक्वेल ‘गलबन्दी’ सार्वजनिक भएको छ । रोधीमा आधारित ‘गलबन्दी’लाई यूट्युबमा सार्वजनिक भएको चार दिनमा बीस लाखभन...
DilipKarki 295 0
बलिउड अभिनेत्री अनुष्कालाई 'बल्जिङ डिस्क' रोग
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अचेल गम्भीर पीडामा छिन् । भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेअनुसार बल्जिङ डिस्क नामक रोगबाट ग्रसित उनी हालै एउटा अस्पतालको अगाडि भेटिएकी थिइन् ।बल्जिङ डिस्क त्यो रोग ह...
DilipKarki 280 0
महिला बन्दै अक्षयकुमार !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले सामाजिक सन्जालमा नयाँ फिल्मको पोष्टर सार्वजनिक गरेपछि उनका प्रसंशकको ध्यान तानिएको छ । यो पोष्टर अरु पोष्टरभन्दा फरक छ, जहाँ अक्षय कुमार आँखामा गाजल लगाइ...
DilipKarki 229 0
सानो पर्दातिर माधुरी
एजेन्सी । ठूलो पर्दाको फिल्म ‘कलंक’मा अभिनय र दमदार नृत्यबाट दर्शकको ध्यान खिचेकी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित चाँडै नै सानो पर्दामा देखिने भएकी छिन् । उनी रियालिटी सोमा जजको भूमिकामा देखिँदै...
DilipKarki 283 0
'नेहा कक्कड लाइभ' कन्सर्ट काठमाडौंमा हुँदै
काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कड आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि पहिलो पटक काठमाण्डौ आउने भएकी छिन् । आउँदाे जेठ २५ गते शनिबार आयोजना हुने ‘नेहा कक्कड लाइभ’ मा नेहाले आ...
DilipKarki 239 0
फ्रान्सको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा प्रियंका
लन्डन । फ्रान्समा जारी कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेड कार्पेटमा नेपाली अभिनेत्री प्रियंका कार्की पनि देखिएकी छन्। हलिउड र बलिउड स्टारसहित संसारभरका सेलिब्रिटी आइकनका साथमा पहिलोपटक नेपाली अभिनेत्री...
DilipKarki 250 0
संगीत तथा रोयल्टी संकलन समाजमा आर्थिक अनियमितता
काठमाडौं, जेठ ६ - संगीत तथा रोयल्टी संकलन समाजमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको छ । गीत–संगीतबाट उठेको रोयल्टीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । आइतबार काठमाडौंमा बोलाइएको...
Sb Saud 492 0
म जन्मिदा भावीले भाग्य लेख्न बिर्सिएछ (भिडियो)
काठमाडौं । ‘म जन्मिदा भावी..’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गायक निर्मल पनेरुले शुक्रबार युट्युवमार्फत् गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रहरी निरीक्षक गायकसमेत रहेका पनेरुको आवाज रहेको गीतमा हरि...
DilipKarki 631 0
मिस वर्ल्डको तयारीमा केन्द्रीत हुन्छु: अनुष्का
अझैं पनि समाजमा महिला र पुरूषबीच समानता नभएको कुरा उनी स्वीकार्छिन्। त्यसको लागि सांसद, मन्त्रालयमा कति महिला छन् भनेर हेर्ने नपर्ने उनको बुझाइ छ।
नेपथ्यले ल्यायो हिमाल पहाड संवादको ‘नासै छ्याँबा’...
काठमाण्डौं । नेपथ्यको चर्चित गीत ‘नासै छ्याँबा’ काे म्यूजिक भिडियोमा सार्वजनिक भएको छ । ‘नासै छ्याँबा मनो ह्योल’ काे अर्थ ‘गाउँहरु मध्येमा मनाङको गाउँ राम्रो’ भन...
DilipKarki 215 0
नेपथ्यले ल्यायो हिमाल पहाड संवादको ‘नासै छ्याँबा’ को म्यूजिक भिडियो
'कबड्डी कबड्डी कबड्डी'
फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ राई, कर्मा शाक्य, अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीसँगै, रिश्मा गुरुङ, माओत्से गुरुङ, पुस्कर गुरुङ, कविता आले, विल्सन विक्रम राई, लुनिभा तुलाधर, विजय बराल, बुद्धि तामाङ, कमलमणी नेपाल,...
Sb Saud 298 0
बिहे नगरी आमा बनिन् एमी ज्याक्सन
मुम्बई । बेलाबेला बलिउडमा नायिकाहरू बिहे अगाडि नै आमा बन्न लागेको खबर बाहिरिने गर्छ। केही समयअघि बलिउड नायिका एमी ज्याकसनले बिहे नगरी आफू आमा बन्न लागेको खुलासा गरेकी थिइन्। मोडल तथा नायिका बु्रना...
DilipKarki 294 0
सलमान र शाहरुख एउटै चलचित्रमा ल्‍याउने प्रयास सम्भ...
एजेन्‍सी । बलिउड अभिनेता शाहरुख खान र सलमान खान पछिल्लो समय एकअर्काका निकै घनिष्ठ साथी भएका छन् । दुवै जना एकअर्काको चलचित्र प्रमोशनको काममा कुनै पनि किसिमको कसर छोड्दैनन् । यी दुवै एकअर्काको च...
DilipKarki 156 0
सलमान र शाहरुख एउटै चलचित्रमा ल्‍याउने प्रयास सम्भव होला ?
नेपालमा लुकेका भारतीय आतंकवादीको खोजी ‘इन्डियाज्...
काठमाडौं । नेपालमा समेत छायाँकन गरिएको भारतीय फिल्म ‘इन्डियाज् मोस्ट वान्टेड’ले आफ्नो पोस्टरमा नेपाललाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । ‘नो वन किल्ड जेसिका’, ‘रेड’...
DilipKarki 262 0
नेपालमा लुकेका भारतीय आतंकवादीको खोजी ‘इन्डियाज् मोस्ट वान्टेड'
जिन्दगीका खराब चलचित्र हटाउन चाहन्‍छु : सन्‍नी लिय...
एजेन्‍सी । बलिउडमा नायिका सन्नी लियोनीको छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ । सन्नी अहिले भारतमा जमेकी पनि छिन् । बलिउडमा उनलाई विशेषगरि आइटम नृत्यमा बढी अवसर मिल्ने गरेको छ । तर, नायिका सन्नी लियोन...
DilipKarki 317 0
जिन्दगीका खराब चलचित्र हटाउन चाहन्‍छु : सन्‍नी लियोनी
‘मिस नेपाल २०१९ ‘ को ताज अनुष्कालाई
काठमाडौं । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०१९’को उपाधि अनुष्का श्रेष्ठले जितेकी छिन्। ७ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अनुष्काले ‘मिस नेपाल’को उपाधि जितेकी हुन्। ‘ तपाइको विचार अधिकार...
DilipKarki 259 0
एक करोड ८० लाखको प्रियंकाको पहिरन
मुम्बई । बलिउड र हलिउडका कलाकार कति कमाउँछन् भनेर ठ्याक्कै अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरूको खर्च देखेर फ्यान आश्चर्यचकित हुन्छन्। यति बेला अभिनेत्री प्रियंका चोपडाका तस्बिर भाइरल बनेका छन...
DilipKarki 182 0
जाजरकोटकी सिजन बलिउडमा, 'हर जनम मे मिलेंगे' छायांक...
जाजरकोट । भेरी नगरपालिका ३, पीपलडाँडाकी २१ वर्षीय सिजन पुनले बलिउडकी मुख्य अभिनेत्री बन्ने अवसर पाएकी छन्। अभिनेत्री सिजनको 'हर जनम मे मिलेंगे' बलिउडमा चलचित्रको हाल धमाधम छायांकन भइरहेको छ। च...
DilipKarki 302 0
जाजरकोटकी सिजन बलिउडमा, 'हर जनम मे मिलेंगे' छायांकन हुँदै
देशभरका हलमा ‘दाल भात तरकारी’
काठमाडौं । आजदेखि देशभरका फिल्म हलहरुमा दालभात तरकारी रिलिज भएको छ । पछिल्लो पटक फिल्म ‘शत्रु गते’ दर्शकमाझ ल्याएका व्यानर मह सञ्चारले शुक्रबारबाट दर्शकका लागि फिल्म ‘दाल भात तरकारी&...
DilipKarki 191 0
'प्रचण्डले भाका फेरेपछि विप्लवलाई नाँच्‍ने फुर्सद...
काठमाडौं । झण्डै दश वर्ष अघि तत्कालिन नेकपा माओवादीले सिंहदरबार घेर्ने आन्दोलन गरिरहँदा त्यो समयमा नायिका रेखा थापा चर्चामा आइन्। भद्रकाली मन्दिर अगाडि तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल &lsquo...
DilipKarki 228 0
'प्रचण्डले भाका फेरेपछि विप्लवलाई नाँच्‍ने फुर्सद छैन्'
करणको ‘कठपुतली’ भएको आलियाको स्वीकार
निर्माता करण जोहरले बलिउडमा डेब्यू गराएका अभिनेत्री आलिया भट्ट थोरै समयमा धेरै हिट फिल्म दिने अभनेत्रीमा पर्छिन् ।
DilipKarki 204 0
छोरी सुहानाको जोडी खोज्दै झरना थापा
काठमाडौं । ‘ए मेरो हजुर–३’ ले बक्स अफिसमा उत्साहजनक ब्यापार गरेपछि निर्देशक झरना थापा अर्को चलचित्र निर्देशनको तयारीमा जुटेकी छिन् । दर्शकले ‘ए मेरो हजुर–३...
DilipKarki 298 0
प्रिन्सी र प्रिस्माको ‘झुमा झुमा’ ट्रेन्डिङमा
DilipKarki 245 0
अस्ताए संगीतकार मदन दीपविम
पुराना संगीतकार मदन दीपविमको निधन भएको छ । इलमा जन्मिएका दीपविमन पछिल्लो समय अमेरिकास्थित सनफ्रान्सिस्कोमा बस्दै आएका थिए । उनको हृदयाघातको कारण निधन भएको परिवारले जनाएको छ ।
DilipKarki 208 0
काठमाडौं,चैत्र २८ – गायक राजेशपायल राईको ‘दर्शन नमस्ते’ शृंखलाअन्तर्गतको नयाँ एल्बम 'दर्शन नमस्ते–४' सार्वजनिक भएको छ । नेपाली गायन क्षेत्रमा ‘राई इज किङ&rsq...
Sb Saud 651 0
‘घायल बनायौ तिमीले’ अब बजारमा
काठमाडौँ, चैत २३ - चर्चित गायक राजेश पायल राई र लोकप्रिय गायिका मल्लिका कार्कीको नयाँ सांगितिक कोशेली “घायल बनायौ तिमीले” सार्वजनिक भएको छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा लोकप्रिय कल...
Sb Saud 322 0
भरत ताम्राकारको 'सरर मोटरमा' भिडियो गीत सार्वजनिक
एक सयभन्दा बढी गीतहरु गाइसकेका गायक ताम्राकारका गुराँस फूलझैँ फूलेकी माया..., कहाँ जाउँला बास छोडी तिम्रै दिल त मेरै घर हो...,ए दिल भुलिदेऊ उसलाई अझैँ किन याद आउँछ....जस्ता गीतहरु निकै लोकप्रीय रहेका...
Ramji Tamatta 410 0
फिल्म क्षेत्रमा पाइला चाल्दै झरना-पुत्री 'सुहाना'
काठमाडौं,चैत्र १८ – नेपाली फिल्म उद्योगकी सफल अभिनेत्री झरना थापाकी छोरी सुहाना थापाले यसै वर्षबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पाइला चालेकी छन् । उनै सुहानाको अभिनय रहको फिल्म ‘ए मेरो...
Sb Saud 306 0
अमेरिका जाँदै नेपाल आइडलका विजेता
काठमाडौं चैत्र,८ - चर्चित गायन रियालिटी शो नेपाल आइडल सिजन-२ का उत्कृष्ट तीन प्रतियोगी अमेरिका भ्रमणमा जाने भएका छन्। नेपाल आइडल विजेता रवि ओड, फस्ट रनरअप विक्रम बराल र सेकेन्ड रनरअप सुमित...
Sb Saud 434 2
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराई नियुक...
काठमाडौं, चैत्र ७ - सरकारले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष निकिता पौडेलले बोर्डबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त अध्यक्ष पदमा भट्टराई नियुक्त गरि...
Sb Saud 403 0
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराई नियुक्त